စိတ်မကောင်းလို.ပါ ။ - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်. သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဘန်းကျော် ကိုကိုတွေရှိပါတယ။် သူတို.တွေကွိုင်မှာစိုးလို. ကျွန်တော်MZ က အချို ပို.စ်တွေကို ကျွန်တော် forward လေ့ရှိပါတယ် ။MZ လိပ်စာအတိအကျနဲ.ရေးသားသူပါ ထည်.ပေးပါတယ်။ မနေ့က သူငယ်ချင်းဆီလာတဲ. forward မှာ MZ ကပိုစ်တစ်ခုပါလာပါတယ်။ဒါပေသည်. လိပ်စာ ၊ေ၇းသူ ဘာမှပါမလာပါဘူး ။ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ကျွန်တေ်ရေးတဲ.ပိုစ်ကိုကြိုုက်လို.ကျေးဇူးတင်ရင်ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ် ။forwardရင် ထိုင်ပါဦးချချင်ပါတယ်:D ။ဒါပေမယ်.ဗျာ ရေးသူရတဲ့ ပီတိလေးတော.ခံစားချင်တာပေါ့။ဘယ်သူ့ပိုစ်ပဲforward လုပ်လုပ် ရေးသူလေးတော့ထည်.ပေးကြပါနော် (ဘယ်သူ.ကိုမှမရည်ရွယ်ပါဗျာ ၊နည်းနည်းခံစားရလို.ပါ):((:2: